Taliska Daraawiishta Gobolka Sanaag oo ku Hareereysan Taliye ka tirsan Somaliland – SBC
Taliska Daraawiishta Gobolka Sanaag oo ku Hareereysan Taliye ka tirsan Somaliland
Taliska Ciidanka daraawiishta gobolka Sanaag ee Puntland ayaa sheegay in ay ku hareereysan yihiin hotel ku yaala Magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag kaas oo uu ku jiro taliye ka mid ah taliye yaasha Maamulka Soomaaliland ee ku magacaaban gobolka .
Taliye C/laahi Cumar Cashuur oo la hadlayay SBC International ayaa u xaqiijiyay in taliyaha ay ku hareereysan yihiin lagu magacaabo Ceydiid Axmed Nuur islamarkaana uu si dhuumasho ah uga soogalay dhanka rafka magaalada Baran.
Waxa uu intaasi raaciyay Taliye Cashuur in ninka uu horkacayo maleeshiyaad isaga ilaalo u ahaa, Imaatinka gobolka uu yimidna uu ka dambeeyo ula jeedo maamulka Soomaaliland uu ku sheeganayo gobolka islamarkaana ay ka ciidan ahaan ay arinkaasi ka soo horjeedaan .
waxa uu sidoo kale sheegay Taliyuhu in sidoo kale ay wajaheyso arintan hadalo dhowaan ka soo baxayay Maamulka Soomaaliland kuwaas oo ku aadanaa in wafuud ka mid ah Maamulkaasi oo uu horkacayo Wasiir ka mid ah wasiirada Maamulkaasi uu booqasho ku marino doono qeybo badan oo ka mid ah goobaha Maamulkaasi uu ka arimiyo gobolka Sanaagna ay ku darsadeen sida ay sheegteen .
Wareysiga oo dhinacyo badan Taabanayay ayaa sidoo kale Taliye Cashuur waxa uu ku tilmaamay Somaliland in ay qaab Gaadmo ah ku damacsantahay in ay kula wareegto gobolka Sanaad iyadoo ka Faaiideysaneysa dagaalada ka socda Galgala waa sida uu hadalka u dhigaye, waxaanu ugu baaqay Maamulka Puntland in ay arinkaasi ku feejignaadaan.
sidoo kale waxa uu ku eedeeyay Somaliland in ay ka mid tahay qolyaha Argagixisada islamarkaana laga soo Abaabulo Falalka foosha xub Maamulkaasi.
Sikastaba ha ahaatee Taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ka ciidan Daraawiish Puntland ahaan ay ka hortagayaan Falalka ay damacsantahay Soomaaliland in ay ka sameyso gobolka isagoona sheegay in uu jiro Abaabulo uu maamulkaasi ku doonayo in uu saraakiilo ka socda ku keeno gobolka iyagoo ku lifaaqaya xuskooda 18ka May waasida uu hadalka u dhigaye.
Filo Wareysigoo dhameystiran…
SBC International Baran